သူနာပြုအလုပ်အကိုင်များဒူဘိုင်းဆေးရုံမှာရှိရာငါ့အ CV ကိုပေးပို့ဖို့? 🥇
ဒေသတွင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်များ နိုင်ငံတကာအလုပ်များ ရှာသူ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်သူနာပြုများနှင့်လူများအတွက်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ထွက်ရေးသားခြင်း။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်, သငျသညျအထကျရပါလိမ့်မယ်နဲ့ သငျသညျအစဉျအမွဲကိုသိအရာအားလုံးအတွက်ထက်ကျော်လွန်.
တစ်ဦးသူနာပြုကြောင့်လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူနာပြုဝန်ထမ်းအများစုဟာတခြားသူတွေကိုကူညီပေးဖို့မှုတ်သွင်းနေကြသည်။ ဒါဟာကြင်နာတဦးတယောက်ကိုတယောက်ဧည့်သည်များနှင့်ရွေ့လျားကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တိကျသောအလုပ်က၎င်း၏လူတိုင်းမရ။ ထိုမှတပါး, သူနာပြု ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အမှုအရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြ.
တစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်သငျသညျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကိုချစ်ရကြမည်။ သင်ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်ဘာကိုချစ်ရသောအခါလို့ပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရရှိပါသည်နှင့်သင်ဤအနေအထားများအတွက်လိုအပ်သမျှရဲ့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆေးရုံပိုင်ဆိုင်မှုအများစုပိတ်ထားရဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုလူနာတစ်ဦးဆေးရုံသို့မဟုတ်အခြားအရပ်ဌာန၌အဲ့ဒီအချိန်မှာအခါ။ သင့်ရဲ့တာဝန်ပဲအိပ်ရာနှင့်အတူအခန်းတခန်းထဲမှာနေပါနဲ့အိပ်စက်ခြင်းသူ့ကိုစောင့်မရှောက်ကြရသည်။ လူနာအများစုဟာဒူဘိုင်းအများကြီးအကူအညီနှငျ့လုံခြုံလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးအဖြစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုကြည့်ပြီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ.
အဆိုပါဆေးရုံများအများစုဟာကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့အဆင်သင့်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာကြ၏။ အထူးသဖြင့်အတွင်း Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု လူတွေကိုကူညီသူတို့ယူအေအီးအတွက်လုပ်ပေးသမျှကိုဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျသူနာပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသဘောတူလျှင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သေချာဘို့သင့်ကိုသင်၏အသက်တာကိုတိုးတက်စေရန်စစ်မှန်သော Drive နှင့်သင့်ပတ်လည်မြား၏ဘဝများနှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းရှိပြည်ပရှိအဖြစ်။ သငျသညျကွိုးစားအားထု, ဒါပေမယ့်အခါတိုင်းပါလိမ့်မယ်
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start MY လာသောအခါအစဉ်အဆက်အချိန်။ သငျသညျကျိန်းသေသင်ကူညီတခြားသူတွေအားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းသင်သူနာပြုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့သာရာအရပျမဟုတျပါဘူး။ တစ်ဦးရှိပါတယ် ဆေးရုံများ၏တပြင်လုံးကိုစာရင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
အဆိုပါအောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးလည်းဖတ်သင့် ဆေးကုသမှုများအတွက်လမ်းညွှန်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်အလုပျသမားမြား၏အများစုမှာအချို့သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
အရာဝတ္ထုနှင့်လက်မျက်စိညှိနှိုင်းကြိုးကိုင်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ ဥပမာတစ်ခုမှာသင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိကျွမ်းသေချာဖြစ်ရမည်လေးတွေနှင့်အတူသစ်ကိုလူနာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်ဤအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သငျသညျစိန်ခေါ်မှုများအများကြီးရောက်ရှိရန်နှင့် overhead ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်။ မြေတပြင်လုံးယဉ်ကျေးမှုသင်ဒူးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှုစေသည်။ ထိုကျိန်းသေ, ကွေးအပါအဝင်လိမ်, ဆွဲ, အချို့တိုးတက်မှုနှင့်အတူသငျသညျ stooping ။
ဒူဘိုင်းအတွက်ဆေးကုသမှုတစ်ခုလွယ်ကူသောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သီးခြားလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ် ဒူဘိုင်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက်။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုဝန်ထမ်းအဖြစ်, သင်အလုပ်တခုကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ထံမှ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အလုပ် စူပါဗိုက်များကမေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်တာဝန်။ တဖန်သင်တို့မြင့်မားသောကန့်သတ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်အလုပ်များကိုတချို့ဆေးကုသမှုနှင့်အညီ ယူအေအီးဥပဒေ.
အပြုသဘောဘက်တွင်နိုင်ငံတကာဆေးရုံများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအားလုံးတန်းတူများမှာ အခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်။ လည်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလုပ်သားအင်အားငှားရမ်းကာအားလုံးပါဝင်နိုင်သူနာပြုဝန်ထမ်းတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်, သင်သည်များစွာသောလူမျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူနာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကမသန်စွမ်း, ဝါရင့် status ကိုသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများအောက်တွင် protected အခြားမည်သည့်အခြေခံ၏အခြေခံပေါ်မှာခွဲခြားမှုမထားဘူးမှသတိရရမည်ဖြစ်သည်။
ok, အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျအစဉျအမွဲဒူဘိုင်းအတွက်ဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်ဆက်ကပ်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကနေဆေးရုံများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့သူနာပြုအလုပ်အကိုင်များကိုအခြေခံထားပါတယ်။ သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏မရှိမေးခွန်းများကိုမေး၏။ ထို့အပြင်အပျော်အပါးစဉ် သငျသညျယူအေအီးရပိုင်ခွင့်များအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကောင်းသောထက်ပိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိရန်ရှာကြသည်လျှင်။ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်သင်တစ်ဦးရေရှည်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေကြပါသည်, f.
ဒူဘိုင်းအစိုးရဆေးရုံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဒုက္ခအဘို့အထွက်တစ်လမ်းဖြစ်လာသည်။ ကောင်းတဲ့လုပ်ခလစာနှင့်မြှင့်တင်ရေး၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ရှုထောင့်အတူ။ သငျသညျသင်၏ခြေကိုတက်ရပြီး run နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားလျှင်။ သို့မဟုတ်သင်ယူအေအီးနေထိုင်နေကြသည်။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏တစ်ဦးတည်းသာအနှုတ်လက္ခဏာဘက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့တစ်ခက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းရှိလူများ သငျသညျကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပျကွောငျးဆေးရုံများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပြအပေါ်အောက်တွင်, သင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, သင်သည်သင့်ကိုယ်သင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အအယောင်ဆောင်လျှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဖြစ်ပါသည် ညာဘက်ကုမ္ပဏီသင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေလျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍမှာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းညွှန်ကျိန်းသေသငျသညျအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်တို့အဘို့စီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးသောနေရာများ သင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းပေါ်ပထမဦးဆုံးအစိုးရအဖွဲ့၏-related အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
DHA - ဒူဘိုင်းကနျြးမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့
အတွက် DHA ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အဆိုပါ No.1 အဖြစ်ဒူဘိုင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီမြေတပြင်လုံးမှုစနစ်တခု, လက်လှမ်းထိရောက်သောနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဒီစနစ်ဖြစ်ပါသည် ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ခြွင်းချက်နှုန်းထားများကျော်တာ.
၏စီမံခန့်ခွဲမှု ဒူဘိုင်းကနျြးမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့။ ကျိန်းသေအများပြည်သူကျန်းမာရေးစနစ်ကာကွယ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နှင့်တစ်ဦးစံမြှင့်။ ထိုမှတပါး, DHA နှင့်အတူအားလုံးကိုဝန်ထမ်းမျှော်လင့်နေပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအသက်နှင့်ကျန်းမာရေး၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းမှ.
အဆိုပါ DHA ရဲ့အစိုးရမစ်ရှင် excel ။ တစ်ဦးဦးဆောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းကသို့ဒူဘိုင်းအသွင်ပြောင်းထက်ပို။ ထိုအခါလူနာအများစုမျှော်လင့်နေကြ ဒီဦးတည်ရာကိုအောင်မှ ဆန်းသစ်နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံစောင့်ရှောက်မှုမော်ဒယ်များမြှင့်တင်ရေးနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သေချာဘို့သင့်ကိုဖြစ်ရလိမ့်မည်နေစဉ်ဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီကြီးမြတ်သောဖွစျလိမျ့မညျ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အတွက်ရွေးချယ်မှု.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျမတတျနိုငျ ဒူဘိုင်းအတွက်တိုက်ရိုက်အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထား DHA အတူ။ သင့်အနေဖြင့်ယေဘုယျအစိုးရကွန်ရက်စာမျက်နှာလျှောက်ထားရန်ရှိသည်။ ပြီးတော့ကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုကြီးကြပ် ဒူဘိုင်း၏စော်ဘွားများအတွက်။ သို့သော်နေဆဲ, အ DHA လည်းယူအေအီးအတွက်အခြားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကတဆင့်န်ဆောင်မှုများပေးအာရုံစိုက်။
Armada အဖွဲ့ (ပုဂ္ဂလိက)
DHC နှင့်အတူ SEARCH ဖွင့်လှစ်
ဒူဘိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံစားချက်တွေကို ရာထူးတွေအများကြီးပေးပါသည်။ သင်တစ်ဦးကြည့်သောအရာကိုင်အရှိဆုံးသင်ကိုက်ညီရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ website တွင်, သင်လုပ်နိုင်သည် နေရာလွတ်၏တည်နေရာနှင့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းစတင်ရန်။ သငျသညျဒူဘိုင်းတစ်ဦးသူနာပြုအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျရှိရာဒုတိယကုမ္ပဏီ။
သူတို့ရဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှတံခါးကြည့်ဖို့ က်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကတည်နေရာအလိုက်နေရာလွတ်ခွဲထားခဲ့သည်နဲ့ရှေးခယျြထားပါပြီ။ တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့အလုပ်ဖော်ပြချက်။ DHHC အမြဲလျှောက်ထားမှုအတွက် link တစ်ခုရှိခြင်းပါဝင်သောနေရာလွတ်။
အလွယ်ကူဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုမှာ တစ်ဦးအခန်းအလွတ်ရှာဖွေအလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်များ သင်အလွယ်တကူ DHC အွန်လိုင်းမှကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ရာထူးမဆိုစဉ်းစားခံရဖို့အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးတီးသည်လက်ရှိတွင်သူနာပြုများအတွက်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2018 နှင့် 2019 အတွက်သူတို့ပုံမှန်အားစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း စုစုပေါင်းန်းကျင် 23-50 ပွင့်လင်းအလုပ် (s) ကို။ ဒါကြောင့်အခြိနျမှနျမှ၎င်းတို့၏ website တွင်ကြည့်ပါကထိုက်သည်။
Mediclinic စီးတီးဆေးရုံ (Mediclinic အင်တာနေရှင်နယ်)
Dr Sulaiman al-Habib medical Center မှာ
Moorfields မျက်လုံးဆေးရုံ ဒူဘိုင်း
Sobeh သွေးကြောဆိုင်ရာနှင့် Medical Center မှာ
Danat အယ်လ် Emarat ဆေးရုံတွင်အလုပ်ရှာဖွေရေး
အဆိုပါ Danat အယ်လ် Emarat ဆေးရုံအခြားပျိုးခင်းဖြစ်ပါတယ် အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ ဒါကဆေးရုံကိုကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း အဘူဒါဘီအတွက်အခြေစိုက်စခန်း။ သူတို့ကအဆက်မပြတ်အရည်အချင်းပြည့်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများရှာကြ၏။ အထူးသဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးသူနာပြုများ။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မှသင်၏ CV ပေးပို့နိုင်ပါသည် hr@danatalemarat.ae
သူတို့က ကျိန်းသေသငျသညျနေရာစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သောကြောင့်နှင့်အတူန်ထမ်းတွေအများကြီး၏ Danat အယ်လ် Emrat ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အချင်းများရှိခြင်း။ စိတ်ထဲ၌ဤမြင့်အတန်းအစားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အတူ။ ဖြစ်နိုင်စရာ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အဓိက turnaround.
ဒါကကုမ္ပဏီအစေခံရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါသည် ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏အသိုင်းအဝိုင်း။ ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. က State-Of-The-Art စက်ရုံအတွင်းအမြင့်ဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစံနှုန်းများကိုပေးသူသည်ထိပ်-rated ကုမ္ပဏီ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်တသားတအရာများအတွက်, သငျသညျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာကောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျထူးချွန်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ လည်းပဲ အမျိုးသမီးတွေအတူလုပ်ကိုင် နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင်။ သင်တို့အဘို့ဤရူပါရုံအလုံအလောက်ကောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။ အစဉ်မပြတ်လူနာတိုးမြှင့် န်ဆောင်မှုများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အသွေးကို။ သူတို့ရဲ့လူနာတွေအတွက်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ဘ်အတွက် Shaikh Khalifa ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီး
ငါတို့သည်သင်တို့မှမိတ်ဆက်ခြင်းသင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီရှိတ်ခါလီဖာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလည်းဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အတွက်ထိပ်တန်း rated အဖှဲ့အစညျး။ အဆိုပါရှိတ်ခါလီဖာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီး (SKMC) အဘူဒါဘီမြို့တွင်တည်ရှိသည်။ နှင့်ဒေသခံအသုံးပြုသူအများဆုံး စော်ဘွား၏ဤအပိုငျးကနေ ဒီဆေးဘက်မြို့စက်ရုံသုံးနိုင်သည်။
သူနာပြုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဂျော့ဘ်ဟာအထင်ကရအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူပြုသည်ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုအ Shaikh Khalifa ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီးသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်သူများကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုမေတ္တာရှင်နေကြတယ် အဘူဒါဘီအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ်။
SKMC နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့သူနာပြုအလုပ်အကိုင်အများအပြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ရှိသည်။ ထူးချွန်၏စင်တာများတစ်ခုမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မန်နေဂျာ၏အမြင့်မားအရည်အချင်းပြည့်မီအဖွဲ့သည်။ စိတ်၌ဤအတူသင်တို့သည်လည်းအားလုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိပြီးပြည့်စုံန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျရပ်ရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ် SKMC နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကတန်ဖိုးရှိလား?
အဘယ်ကြောင့် SKMC ဖို့လျှောက်ထား wort ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ?. သူတို့အကြီးဆုံးဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးရှိသည်ကြောင့် အဖွင့်တာ။ မဖော်ပြသူတို့ကယူအေအီးအတွက်အကြီးဆုံးဆေးရုံဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး 586-BED ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ဆေးရုံနှင့် 14 ပြင်ပလူနာအထူးဆေးခန်းပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါအဆောက်အဦ။ တဖန်သင်တို့ပင်နှင့်အတူအခြားသူများကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည် အဘူဒါဘီသွေးဘဏ် အခြားသူများကိုကူညီပေးနေမယ့်တန်ဖိုးကိုထက်ပိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သူတို့ကအစပူးတွဲကော်မရှင် International ကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ SKMC လည်းမူလတန်း Angioplasty ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနဲ့ Cycle IV ရင်ဘတ်နာကျင်မှုရေးစင်တာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထက်ပိုမိုကြောင်း SKMC နိုင်ငံတကာဆုတွေအများကြီးရှိခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Cycle III ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သာ 12th အောင်မြင်ရန်။ ဤအောင်မြင်မှုနှင့်အတူသူတို့ဖြစ်ကြသည် ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်.
SEHA - အဘူဒါဘီကနျြးမာရေးန်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီ, Cleveland ဆေးခန်းကစီမံခန့်ခွဲ။
A Cleveland ဆေးခန်းအဘူဒါဘီနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဤသည်အခြားဖြစ်ပါသည် သငျသညျထူးခြားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတှေ့နိုငျရှိရာအရပျ။ ထို့အပြင်ဤမသာယူအေအီး based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏တစ်ဦးမတူနိုင်တဲ့ extension ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်။ ထို့နောက်အဘူဒါဘီအတွက်အမေရိကန်အခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှောက်ထားရန်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦး Cleveland ဆေးခန်းရဲ့ Model လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း, Cleveland ဆေးခန်းအဘူဒါဘီအတွက်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတိုက်ရိုက် access ကိုပေးသည်။ အဘူဒါဘီအတွက်နယူးပြည်တော်ပြန်ကျော်ကွေး ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရရန်။ အဘူဒါဘီအတွက်စတင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အဦးတည်မှာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေ့လျား။
အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သငျသညျကျိန်းသေရေရှည်မှာစဉ်းစားသင့်တယ်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသူနာပြုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်စမတ်စိတ်ကူးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမှာအတွက်အချိန်ရှာဖွေနေသည်သင်၏အလုပ်လျှော့ချ။ တဖန်သင်တို့ကိုနိုင်ငံတကာလူနာကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘက်မှတွင်ပြုလုပ်လေ့ကျင့်ရေးရယူထားသောဘို့ပြည်ပမှာသွားလာရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကေနဒါ.
Dar Al-Shifaa မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Start
အဆိုပါသူနာပြုအလုပ် Next ကိုရာအရပျ Dar Al-Shifaa ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါစိတ်ဝင်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း. ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အကောင်းဆုံးကို-paid ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်း။ အဆိုပါဆေးဝါးနှင့်ခွဲစိတ်ဆေးရုံ, မတစ်ဦးအစိုးရ operated ။ သို့သော်အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သောအဖွဲ့အစည်းက။ ရန်ထိုက်တန် အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးတစ်ဦးကြည့်.
အဘူဒါဘီအတွက် 24 /7ဆေးဘက်န်ဆောင်မှု။ တည်ရှိသောအစ္စမေးလ် alkhaja ​​& ၏သားတို့အနေဖြင့်ယူအေအီးပိုင်ဆေးရုံ, အဘူဒါဘီ မြို့, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ ဒါ့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘို့အလွန်ကောင်းတဲ့နေရာ။
ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်များများမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လုံလောက်သောကောင်းသော?။ ကိစ္စတခုတကယ်တော့အဖြစ်, Dar Al-Shifaa ဆေးရုံအဘူဒါဘီအတွက်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ဧပြီ 1 982 အပေါ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကထုတ်ပေးတဲ့လိုင်စင်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ဒါကြောင့်မဖြစ် အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်အပြည့်အဝလိုင်စင်ရ။
ထက်ပို Dar Al-Shifaa ဆေးရုံတစ်ဦးအပြည့်အဝလည်ပတ်ပြဇာတ်ရုံရှိခြင်း။ ထိုအခါအဆောက်အဦးအတွင်းရှိပေးပို့အခန်းထဲမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့် 16 ခန်းအတွင်းလူနာနှင့် 20 ပြင်ပလူနာဆေးခန်းနှင့်အတူ operating စကားပြောခြင်း။ အတိအကျ, သငျသညျနေရာချထားတှေ့လိမျ့မညျ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်။
Healthpoint ယူအေအီးအတွက်အဘူဒါဘီမှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိခြင်း ခိုင်မာတဲ့ရှိနေခြင်းအွန်လိုင်း။ မြေတပြင်လုံးဆေးရုံဒါအဟောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါဘူး။ Healthpoint 2013 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့လို့ပဲ။ ယင်း၏တည်ထောင်သူမှမြင့်မားသောလေးစားမှုနှင့်အတူ။ ပြီးတော့ကတည်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများကြီးငှားရမ်း ဒူဘိုင်းအတွက်ပျိုးခင်းအလုပ်အကိုင်များသည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပညာရေးအတူသင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံကိုရောက်စေဖို့ရှာဖွေနေလျှင်။ လက်တွေ့ထူးချွန်ဘူဒါဘီဒူး & အားကစားဆေးပညာစင်တာဗဟို။ အဆိုပါ Is ယူအေအီး၌သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုအလုပ်ရှင်က.
ဒူဘိုင်းအတွက်စံသူနာပြုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ထိပ်တွင်။ သငျသညျ Wooridul ကျောရိုးရေးစင်တာနှင့် bariatric & အဲဒါတွေက Metabolic ခွဲစိတ်ကုသရေးစင်တာမြျှောလငျ့နိုငျ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, Healthpoint Mubadala ရဲ့ကျန်းမာရေးကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့်အများပြည်သူဆေးရုံအဖြစ်။
အဆိုပါ Burjeel ဆေးရုံ
Burjeel ဆေးရုံတွင်အသည်းအသန်သမား၏အသင်းကို Join ။ ဒါကကုမ္ပဏီအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် နှင့်အဘူဒါဘီအတွက် Burjeel မှာကနျြးမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်သည်။ ဒါဟာဆေးရုံ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူတန်ဖိုးရှိသောအကူအညီပေး.
ဆေးရုံအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၏စိတ်နှလုံးမှာ။ အဆိုပါ Burjeel ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဒေသခံအလုပ်သမားသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်လျှင် နှင့်အသည်းအသန်လူတစ်ဦးသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ Burjeel, ဆေးရုံကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လူတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုတဦးတည်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဤလူမျိုးကိုတစ်ဦးအဖြစ်ကသူတို့ကိုပူးပေါင်းနေကြတယ်ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများသူနာပြု.
သူတို့နှင့်အတူသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများစာရင်းသွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ကောင်းရိုးရှင်းသော။ နယူး အလုပ်ရှာဖွေသူများအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ဆေးရုံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကအလွန်ကောင်းစွာကသိတယ်။ ဒါကြောင့်သင်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုအသည်းအသန်လျှင်။ သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိသော, အ Burjeel မိသားစုမှကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါဟာဆေးရုံခဲ့ သငျသညျအစဉျအမွဲမျှော်လင့်ထားထက်ကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးပို.
သူတို့ကအသစ်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများလိုအပ်သည်။ သူနာပြုနှင့်အတူအထူးသဖြင့်လူဦး ဒူဘိုင်းအတွေ့အကြုံကိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ Reem ကျွန်း Burjeel ဆေးရုံ - - အယ်လ် Ain, Burjeel ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီးထိုသူတို့ကသစ်တစ်ခုနှင့်လာမည့်စက်ရုံ (Burjeel နေ့စောင့်ရှောက်မှုမဖွင့်ထားပါသည်။
အဆိုပါအိုအေစစ် ဆေးရုံ 300 ဝန်ထမ်းများထက် ပို. လုပ်ကိုင်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း 30 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်လူဦးကသူတို့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းအဘယ်ကြောင့်အဓိကအရာရိုးရှင်းပါသည်။ သူတို့ကသွယ်ဝိုက်ငှားရမ်းနေကြ။ အေဂျင်စီများသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီများမှမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ဒီအလမ်းတဝိုက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။
အိုအေစစ် ကျိန်းသေဆေးရုံ လူတွေကရှာကြံ ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်သည်။ သငျသညျ Top-rated ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများပေးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးသူနာပြုရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ပို. ပင်ပြု နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင် အယ်လ် Ain, ယူအေအီး၌တည်၏။
အိုအေစစ်ဆေးရုံ လူတို့အဘို့ရှာနေ HR စီမံခန့်ခွဲမှု။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်သူနာပြုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့မိမိတို့အတွေ့အကြုံကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်သူဝန်ထမ်းအသစ်များကိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ။ တစ်ဦးနှင့်အတူအလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင် ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သော့ချက်။ သင်၌နေသောသူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သနားစုံမက်ခြင်းဖြင့်အလုံအလောက်လှုံ့ဆော် ?. အဖြေဟုတ်သည်မှန်လျှင်, သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပြုစုစောင့်ရှောက်ခံရဖို့စိတ်အားထက်သန်သင့်ရဲ့အဓိကတာဝန် ယူအေအီး၏နေထိုင်သူများအဘို့။ စဉ်တွင် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း သင်သည်အခြားအကိုင်းအခက်မှရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိုမန်အတွက်အိမ်နီးချင်း။ အိုအေစစ်ဆေးရုံလည်းဖြစ်ပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုများအတွက်သင်ကြားရေးမိတ်ဖက် University Medical School ကျောင်းတွင်။
Ajman ၏အစိုးရအထူးဆေးရုံရှိခြင်း။ ဤသူကားအ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသောနေရာအရပ်။ Ajman အထူးအထွေထွေဆေးရုံကြီးအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းအတွက်ထူးချွန်ရရှိကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ajman နေထိုင်သူများမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပို့ဆောင်အတွက်ဒူဘိုင်းအထူးအလေ့အကျင့်အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Nursing ။ ဆေးရုံမြင်ကွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အားလုံးနေထိုင်သူများနှင့်ဝန်ထမ်း '' တစ်ဦးချင်းစီ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဦးဆေးရုံများတွင်အလုပ်လုပ်နေစတင်ခဲ့ကြပေမည်သူကိုသစ်ကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မှကျူးလွန်နေသည်။
ပြန်လာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Ajman အတွက်သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှု၏မြင့်မားသောစံရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်။ အထူးသဖြင့်လူနာလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့နဲ့ကောင်းတဲ့သူနာပြုပတ်ဝန်းကျင်မြှင့်တင်ရန် ဒေသခံယူအေအီးလူမြိုးအတှကျ.
အသက်တာ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့နှင့်အတူအသီးအသီး။ ဝန်ထမ်းများအထူးသဖြင့်အသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များက။ သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်အလုပ်ကြိုးစားလုပ်နေတာများနှင့်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းနိုင်ပါသည်။ Ajman ဆေးရုံနှင့်အတူ, သင်ဖူးနိုင်ပါတယ် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ။ ရိုးရှင်းတဲ့အသစ်အဆက်ပေးသူတွေအများကြီးအလုပ်၏တစ်နှစ်အတွင်းရာထူးတိုးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်။
တစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ် Thumbay ဆေးခန်းအလုပ်နှင့်အတူ
သင်သည်သင်၏သူနာပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start သည့်အခါအခြားသောအရပ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်ရန် Thumbay ဆေးခန်းအတူ။ သို့မဟုတ်ပင်မြေတပြင်လုံး Group နဲ့ !.
အဆိုပါလက္ခဏာတစ်ခုမှာ, အ Thumbay Group မှအစဉ်အမြဲအားလုံးဆေးရုံနှင့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ သငျသညျပုံထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။ အဆိုပါအုပ်စုသည် အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအများကြီးငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဤအအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ဆင်းသက်ဖို့ထိုက်တန်.
လည်းပဲ, ယူအေအီးအတွက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ ထိုအခါဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းစော်ဘွားတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လေထုကိုသင်အဖြစ်မှန်သို့အတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲဘို့လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုပေးအပေါင်းတို့နှင့်နိုင်ပါတယ်။ အတိအကျ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အလာပြီနှင့်အတူကူညီပေးသည်.
သို့သော်ငြားလည်း, သင်သည်လက်ျာအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းလျှင်။ တဖန်သင်တို့သူနာပြုရှာနေကြသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ထိုအ Thumbay ဆေးခန်းအဖှဲ့အစညျးနှငျ့မိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလိုက်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူမည်သူမဆိုထိုသို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အောင်။ သူတို့ကပွင့်လင်းတံခါးများရှိခြင်းနေကြသည်။
တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Thumbay အုပ်စုတစ်စု?
Thumbay Group မှာ သူတို့န်ထမ်းတွေအများကြီးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ထိုမှတပါး, သူတို့ထဲကအများစုဟာမဆိုမှာန့်အသတ်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်အထိ။ ဆေးရုံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာတိုးရန်ရှာနေကြသူအထူးသဖြင့်သူတို့အားသူတွေကို။ သို့မဟုတ်ပဲသူနာပြုစတင်သည်သူတဦးတည်းအဘို့ ကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့လယ်ကွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်။
နယူးန်ထမ်းအလုပ်စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုတွေ့ကြုံခံစားမသာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကလည်းပူဇော်ကြသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှင့်တိုးဘို့အခွင့်အလမ်းများများ။ အလုပ်အကိုင်သူတို့ရဲ့ system ကိုကြံဖန်နှင့်တီထွင်အသစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားပေးထားသည်။ လူနာထိုသူတို့အဘို့အရေးကြီးဆုံးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Dibba ဆေးရုံ - al-Fujairah
Dibba al-Fujairah အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော Fujairah ၏စော်ဘွားအတွက်အဓိကမြို့ဖြစ်၏ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏အစိတ်အပိုင်း။ အဆိုပါဆေးရုံ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကြီးမားသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆဲသူတို့တစ်တွေကြည့်ငှားရမ်းနေကြဘူးရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင် website ကိုမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုခေါ်နဲ့အီးမေးလ်အဘို့ထိုသူတို့မမေးရပေမည်။ သို့မဟုတ် အခန်းအလွတ်စစ်ဆေး ကနျြးမာရေးက်ဘ်ဆိုက်၏န်ကြီးဌာနအပေါ်။
ဒါဟာဤမြို့၌အလုပ်လုပ်ရန်တကယ်ကျိုးနပ်သည်။ ဒါဟာပထဝီအနေအထားအရအဆိုပါ Dibba ဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Dibba al-Fujairah Fujairah ၏စော်ဘွားအတွက် 2nd အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒါကဆေးရုံကိုတကယ်ဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သွားရောက်တန်ဖိုးရှိ. အထူးသဖြင့်သင်ကမိသားစုရှိခြင်းလျှင်။
600 စတုရန်းကီလိုမီတာဧရိယာနှင့်အတူ, Dibba al-Fujairah ဇန်နဝါရီလ 31,301 အတွက် 2018 ၏ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေ (ခန့်မှန်း) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကသင်၏လေးတွေနှင့်ဇနီးနှင့်အတူအခြေချဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် ဆဲအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစမ်းသပ်ဘဝ။
အဆိုပါအပိုဒ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုတစ်ဦးသူနာပြုတွေ့ရှိရန်သင်မည်သို့ပြသ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ သငျသညျအများအပြားပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းမှအောက်ပါသင်၏လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစသူနာပြုငှားရမ်းနေကြ ယူနိုက်တက် Aarab စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ.
Sharjah အတွက်အယ်လ် Zahara ဆေးရုံ
ဒေါက်တာ Sulaiman အယ်လ် Habib ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအုပ်စု
ဒူဘိုင်းက Sky ဆေးခန်း
ဟုတ်တယ်, ယခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးကြီးထွားလာသည်။ နှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်သူနာပြုအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ရှေ့တော်၌ ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဆေးရုံများများအတွက်စီမံကိန်းများနှင့်ရန်ပုံငွေများ။
ထိုအပျမ်းမျှလစာမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးရရှိ။ အဆိုပါကစားသမားဘ၏အစ, သင်တစ်နှစ်လျှင် AED 94,203 ၏မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, သင်သည်သင်၏လစာမြှင့်နိုင်ပါ။ သင်တို့မူကားအပိုစာမေးပွဲများနှင့်အပိုဆောင်းဆေးရုံလေ့ကျင့်ရေးတို့ကိုရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရဆေးရုံများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများ၏အချို့လည်းရှိပါသည် ကောင်းသောငွေနှင့်ငှားရမ်း။ အဲဒီထက်ပိုတယ် သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်။ သငျသညျမူလစာမျက်နှာကျန်းမာရေး / မူလစာမျက်နှာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု, မွေးကင်းစကလေး Intensive စောင့်ရှောက်မှုယူနစ် (NICU), အလုပျသမား & Delivery, Birth နှင့်ထူးခြားသောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်တူအလုပ်အကိုင်များကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ ဤ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့, တစ်ခက်က start ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျရာထူးတိုးရစဉ်သို့သော်ရှည်လျားစည်းကမ်းချက်များ၌, သင်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်လိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသူအုပ်ထိန်းအတွက်အခြားတစ်ဖက်ကလူတွင်, 20 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကိုထက်ပိုမရှိကြပါဘူး။ အတှေ့အကွုံ ဒီအလုပ်ဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦးအလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်တို့မူကားတန်ဖိုးရှိတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရှိသည်။ ထိုအမည်မျှကိုသင်သူနာပြုအတွက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောပေးအပ် ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်လမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ ယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပြုချက်များကိုရနိုင် နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။